Nuqul ka mid ah AirPods ka baxsan anshaxa | Waxaan ka socdaa mac
Nuqul ka mid ah AirPods ka baxsan anshaxa
Pedro Rodas | | Apple, Alaabada Apple
Markasta oo ay Apple soo saarto badeecad cusub, nuqullo ayaa soo baxa. Nuqulada noocan oo kale ah mararka qaarkood ma ahan kuwo aamin ah sida ay noqon karaan, laakiin haddii ay taasi dhacdo Maanta waxaan kuu keenaynaa nuqulku waa mid aan xishood lahayn oo xuduud la leh anshaxa.
Way cadahay in Apple markay suuqa soo galinayso wax soo saar cusub, ay lacag badan galinayso R & D & I maxaa yeelay aduunkan aynu ku horumarayno ma joojinayo isbadalka iyo farsamada iyo tignoolajiyaddu way wada socdaan.
Mid ka mid ah badeecadaha Apple aysan joojin iibinta tan iyo markii la soo bandhigayay ayaa ahaa AirPods, cajiibka ah injineernimada micro-ka ee ku yimid ku tumashada astaamaha Apple ay ku dhex hirgelisay.
Way cadahay in fikirka isku mid ah bilaa fiilooyinka marka lagu daro qaabka ay leeyihiin iyo kiiska meesha loogu shubayo inay ka dhigayaan iyaga ikhtiyaar aad u wanaagsan inkasta oo qiimahoodu inkasta oo ay tahay 179 euro ay aad uga yar tahay waxa aan heli karno noocyo kale sida Samsung, Apple Beats ama Bose.
Hagaag, kuwa jecel nuqulku way ku farxi karaan maxaa yeelay haddii waxa ay rabeen uu yahay inay lahaadaan sameecado sameecado leh oo u eg qaabka AirPods iyaga oo aan noqon AirPods, Shiineysku horay ayey u qabteen shaqadooda si aad u wanaagsan. Waxaan ka helnay shabaqa nuqul aamin ah oo ka mid ah AirPods marka aan dhahno aamin waa mid aad u wanaagsan maxaa yeelay waxa kaliya ee isbadalayaa waa nooca dhameystirka balaastigga oo aan sidaa u badneyn oo dhalaalaya iyo sidoo kale dareemayaal uu sameecadaha dhagaha leeyahay taas oo kiiskan loo beddelay badhanno.
Qiimaha, dabcan, aad buu uga hooseeyaa, sidaa darteed waxaa jiri doona dad badan oo soo jiidanaya badeecadan. Waxaa jira seddex nooc oo kuxiran qaabka kanaalka dhegtaada maxaa yeelay, sidaad ogtahay, Apple waxay kalliftay qiyaas oo kaliya markaa AirPods kuma haboona dadka oo dhan. Moodooyinka ayaa isku magacaaba I7S, I8S iyo I9S.
Sidaad arki karto, kiisaska ay kujiraan waxyar bay isbadalayaan sidoo kale qaabka sameecadaha dhagaha. Mid ka mid ah nuqul aaminka ah ee Apple ayaa ah nooca 'I9S' oo ay ku jiraan boorso gaadiid marka lagu daro kooxda ku soo biirta si aynaan ugu khasaarin dhicitaankooda. Qiimaheedu wuxuu u dhexeeyaa 25,81 euro ilaa 31,31 euro waxaadna ka baran kartaa wax badan oo iyaga ku saabsan xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Nuqul ka mid ah AirPods ka baxsan anshaxa
jojojojo Waxaan horey uheystey koofiyadaha cusub ee xD
Jawaab Juan Ma Noriega Cobo
Ku ilaali MacBook-ga 'Retina' gacantan baqshadda caagga ah
Logoist 3, oo hadda laga heli karo Mac App Store